unalo ikhadi lesipho lokudlala kuGoogle? nantsi iiapos zendlela yokuyikhulula
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ngaba unayo ikhadi lesipho kuGoogle Play? Nazi iiapos zendlela yokuyikhulula
Yaziswa nguGoogle umva ngo-2012, amakhadi ezipho kuGoogle Play ekuqaleni ayekhona e-US kuphela. Ngoku, nangona kunjalo, ungabafumana kumazwe angaphezu kwama-20 kwihlabathi liphela. Nje ukuba uphathe ikhadi lesipho likaGoogle Play, unokulihlangula nanini na xa ufuna: la makhadi ezipho awaze aphelelwe lixesha.
Ke, ulisebenzisa njani ngqo ikhadi lesipho likaGoogle Play? Ewe, le nkqubo ilula kakhulu, kwaye ungayenza kwifowuni / ithebhulethi yakho ye-Android, kunye nakweyiphi na iPC.
Kwisixhobo sakho se-Android, vula iGoogle Play Store usetyenziso kwaye ucofe iqhosha lemenyu oza kuthi ulibone kwikona ephezulu ngasekhohlo. Xa imenyu ivuliwe, uyakuqaphela ukhetho lokuHlala (phakathi kwabanye) - ucofe kuyo, kwaye wena & apos; ngoku ukulungele ukufaka ikhowudi yesipho sakho (enokufumaneka ngasemva kwekhadi lesipho likaGoogle Play emva kokuba ususile i 'Kukrwela ukutyhila ikhowudi' kwindawo engwevu). Inkqubo iyafana kwi-PC nje ukuba uvule i-https: //play.google.com/store kwisikhangeli (kuya kufuneka ungene ngeakhawunti yakho kaGoogle).
Ukuba awuqinisekanga ukuba amakhadi ezipho kuGoogle Play ayafumaneka kwingingqi yakho, nantsi iiapos uluhlu olupheleleyo lwamazwe onokufumana kuwo: iAustralia, iAustria, iBelgium, iBrazil, iCanada, iDenmark, iFinland, iFrance, iJamani, iJamani , IGrisi, iHong Kong, iIreland, i-Itali, iJapan, iMexico, iNew Zealand, iNorway, iPoland, iPortugal, iSingapore, uMzantsi Afrika, iSouth Korea, iSpain, iSweden, iSwitzerland, iTurkey, iUnited Kingdom, kunye neUnited States. E-US, amakhadi ezipho kuGoogle Play afumaneka ngokwahluka kwe- $ 10, $ 15, $ 25, kunye ne- $ 50. Kwamanye amazwe, ixabiso labo liyafana (umzekelo, kummandla we-Euro bona kunye neapos zabo zixabisa i-15, i-25, kunye ne-50 yee-euro, nangona ukhetho lwe- € 10 lungekho).
Awunakho ukusebenzisa amakhadi esipho kuGoogle Play ukuthenga izixhobo kwivenkile kaGoogle. Endaweni yoko unokuzisebenzisa ukuthenga ii -apps, iincwadi ze-e, umculo, kunye nomxholo wevidiyo kuGoogle Play (kunyekuphelaukusuka kuGoogle Play).
Uwasebenzisa njani amakhadi ezipho kuGoogle Play
I-5 yezona zinto zihlekisayo ebusweni ezitshintshisanayo ze-Android kunye ne-iOS
Iimpawu ezili-10 zeQela lokuziQhelanisa ne-Agile
(DEAL) Thatha i $ 50 kwiAmazon Fire HD 10 nge-Alexa engenazandla